Maxkamadda sare ee Puntland oo maanta goaan ka gaaraysa eedeysanayaashii tacadiga kudilay Caaisha Ilyaas “Xarunta gobolka maxaa kasocda”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandMaxkamadda sare ee Puntland oo maanta goaan ka gaaraysa eedeysanayaashii tacadiga kudilay Caaisha Ilyaas “Xarunta gobolka maxaa kasocda”.
August 19, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Sida ay sheegayaan wararka kusoo dhacay xafiiska warqabadka ee Marqaannews ayaa sheegaya in Saddexdii xukmane ee loo haystay dilkii iyo kufsigii Marxuumad caaisho ilyaas ayaa hada la geeyey hoolka Gobolka nugaal.
Maxkmada sare oo Axadii dhageystay kiiskan waxaana lagu wadaa in maanta ay xukun rido kaas oo si wayn loo wada sugayo.
Faahfaahin sheekadaan naga filo insha Allah